Hevitra MPANOHARIANA | Septambra 2013 |
Izay misaraka fasika, izay mitambatra vato
2013-09-17 @ 11:04 in Andavanandro
Tamin'ny lahatsoratra farany nataoko no efa nampiomanako fa hanoratra zavatra mety tsy hahafaly ny ankolafy Ravalomanana aho. Somary niova anefa ny tantana mandra-pahatongan'ny fotoana nanoratako ilay lahatsoratra manaraka.
Teo alohaloha teo dia natopatopan'ny onja any amin'izay tiany itondrany azy ny ankolafy Ravalomanana, tsy fantany intsony ny lalan-kaleha fa mifandrirotra etsy sy eroa noho ny tsy fananana paika mazava. Nataon'ireo mpitarika leo tanteraka ny mpanohana sy ny mpiara-dia, tonga hatramin'ny fanehoa-pahatezerana sy fitakiana mivantana amin'ny alalan'ny serasera sosialy vao misy zavatra kely nihetsika. Voatery nantsoina ho any amin'ny filoha mihitsy ny mpitarika satria nalaza loatra fa ireo mpitarika ireo mihitsy no mpamadika ny tolona sy mpifikitra amin'ny seza nanendrena azy. Saiky diso lalana tanteraka ilay ankolafy...
Noho ny fahatezerana dia efa niomana mangina fa handeha hifidy na inona na inona holazain'ny ankolafy. Nihevitra manko ny tena fa tsy hahavita na inona na inona intsony amin'izay tolona ataony ny ankolafy raha midongy fotsiny amin'ny tsy fandehanana mifidy nefa tsy mahavanona ny hidina an-dalambe. Heveriko fa amin'ny alalan'ny fandrotsaham-bato ihany no famoahana hevitra tsotra indrindra sy tsy hisy mpanelingelina indrindra na iza na iza manomana azy. Mety tsy hisy dikany izay vato iray saingy manantena ihany fa misy ny maromaro mitovy hevitra amiko ka tsy ho very foana izany safidiko izany.
Soa ihany fa tsy nilaza mialoha izay noheveriko hofidiana aho fandrao lazaina fa nanery na nisintona ny ankolafy hifidy izany kandida noheveriko hofidiana izany. Nieritreritra aho fa izay no vita ny amin'ny ankolafy Ravalomanana sy ny tsy fananany sori-dalana mazava. Kanjo tany amin'ilay olona noheveriko hofidiana no niantefan'ny safidin'ny lehiben'ny ankolafy ka dia masa-bary maito kitoza izany, araka ny fitenin'ny ntaolo fahiny. Tafara-dia tsy fidiny
izany. Olona roa no noeritreretiko hisafidianana dia ny n° 7 sy n° 33 satria tsy fifidianana filoha-pirenena no tao an-tsaiko fa fitsapa-kevi-bahoaka ankolaka.
Mila azavaina bebe kokoa angamba io fehezanteny farany nosoratako io. Raha milaza ny hifidy iray amin'ireo olona ireo aho tsy nihevitra aho hoe io olona io no hofidiako ho filoha fa endrika fitakiana ihany no ataoko amin'izany, mety ho zavatra bitika saingy izay no fanehoako ny hevitro. Raha hifidy aho tsy midika fa mety ilay fifidianana ary ho tontosa hatramin'ny farany io fifidianana io fa misy zavatra "tsy ampoizina" hitranga hampihemotra hatrany ny fifidianana eo. Ny hany azo atao dia avelao ny mpifanandrina hatrany no hanao ny fahadisoana hanemotra na hanafoana ny fifidianana dia ho hita indray ny fanapaha-kevitry ny Iraisampirenena hoe hanasazy tokoa ve sa tsy ilay nokendrena hosaziana no mety ho voasazy ka aleo odiana fanina?
Hafatra indray ho an'ireo milaza ny tsy hifidy satria fifidianana tsy izy io dia mariho izao. Tazony izay hevitrao izay ka araraoty aseho amin'ny fotoa-pifidianana mifidy izay olona tsy tian'ireo mpikarakara ireo ho lany amin'ny fifidianana satria tohanan'ny ankolafy tian-dry zareo ahilika tanteraka amin'ny fitondrana ny firenena. Averiko eto indray ny efa nosoratako tany amin'ny tambajotra an-tserasera any hoe itadiavany hevitra hatrany ny fanemorana na fanafoanana ny fifidianana rehefa tsapany fa ho resy izy. Ahoana anefa no hahatsapany fa ho resy izy? Rehefa miray saina daholo ny iray ankolafy fa hifidy olona iray...